ဗန်းမော်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူများအား စာရေးကိရိယာများ လှူဒါန်း – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၇. ၃. ၂၀၁၈နေ့တွင် ကချင်ပြည်နယ်ဗန်းမော်မြို့နယ်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဌ ဦးသက်ဝင်းနှင့် မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များမှ စင့်ကင်ကျေးရွာမှ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကို အ. ထ. က(၁) ကျောင်းသို့လာရောက်ဖြေဆိုကြသော ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအား ခေါက်ဆွဲ. ခဲတံ၊ ပေတံ၊ ခဲဖျက်၊ ဘောပင်များဖြင့် စေတနာထက်သန်စွာ တာဝန်ရှိ ဆရာမထံသို့ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
← ကယားပြည်နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီနှင့် မယ်စဲ့မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း ကျောင်းဆောင်သစ် ရေစက်ချပွဲအတွက် အလှူငွေပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ သတင်းနှင့်မီဒီယာ ခရိုင်တာဝန်ခံများ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပွဲကျင်းပ →